Muraayadaha muraayadaha indhaha ee buuraha | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, nololeedka
Muraayadaha muraayadaha indhaha ee buuraha Waa cunsur lagama maarmaan u ah in indhaha laga ilaaliyo waxyaabaha xun xun, sida falaadhaha 'ultraviolet rays', dabaysha iyo wixii habaas ah ee wasakhda ama cayayaanka ah ee laga yaabo inay hakad galaan.
Qof kaliya maahan, waa inay u hoggaansamaan nooca buurta ee aad ku dhaqmeyso, kuwaas oo raaxo leh, adkaysi u leh oo raagaya, iyo sidoo kale inay u hoggaansamaan naqshadda ku habboon wejigaaga. Ragga qaabka leh waxaan kugula talineynaa sida loo doorto muraayadaha ugu fiican buurta.
1 Astaamaha guud ee muraayadaha indhaha ee buuraha
2 Maxay muraayadaha indhaha muhiim ugu yihiin buuraha?
3 Dhibaatooyinka sababi kara marka aan la isticmaalin
Astaamaha guud ee muraayadaha indhaha ee buuraha
Waxaa muhiim ah in la doorto nooca muraayadaha ee la jaan qaadaya nooca isboortiga ee aad ku tababbaraneyso. iyo waa maxay soo-gaadhista joogtada ah ee indhahaagu ku dhici doonaan si looga ilaaliyo intii suurtogal ah. Ha iloobin in aan suuqa ka heli karno muraayado ay kujiraan adabtarada indhaha hadii aan rabno in aan yeelano muraayadaha indhaha.
Marka la eego guud ahaan, muraayadaha indhaha ee ugu fiican buurta waa kuwa leh qabasho wanaagsan, taas oo awood u leeyihiin inay beddelaan dhawaqooda iyadoo ku xiran qadarka iftiinka taas oo u soo ifbaxday oo leh a daaweynta ceeryaanta. Waa inay sidoo kale calaamadeeyaan qaybta 4 iyo inay tahay mid is-khilaafsan oo sawir qaade ah.
Muraayadaha ayaa ah waxyaabaha ugu waaweyn. Waa inaad doorataa muraayad leh qayb udhaxeysa 0 iyo 4, heerkaan ayaa noo ogolaanaya xaddiga nuugista iftiinka muuqda ee ay sii deyn karto. Si aan fikrad kaaga siiyo, heerka 0 waa muraayadaha indhaha oo hufan heerka 4-na waa mid aad u madow, oo ku habboon meelaha buuraha leh barafka iyo aagagga biyaha leh ee milicsiga qorraxda. Mar dambe maahan arrin ku saabsan mugdiga ugu weyn ee muraayadaha, laakiin in ay la timaaddo daaweynta ugu weyn ee ka hortagga UV.
Midabada way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran nooca baahida, kuwa midab cagaaran waxay noo ogolaadaan inaan si sax ah u qabanno midabada. Bunni Waxay naga caawinayaan inaan sifeyno shucaaca buluugga ah si aad u wanaagsan oo aan u kordhinno qoto dheerka duurka. Kuwa jaalaha ah Waxay ku habboon yihiin maalmo daruuro iyo iftiin yar, laakiin sidoo kale waa inay ku daraan daaweynta anti UV. Kuwa cirro waxay siinayaan midab nalka waxayna ixtiraamaan midabada dabiiciga ah.
Lenses Photochromic: Waxay ku habboon yihiin isboortiga sida baaskiil wadista, maadaama ay si fiican ula jaanqaadayaan iftiinka, iyaga oo aan dareemin meelaha adag ee iftiinka ee aag ka socda meel kale.
Muraayadaha kala qaybsan: Waxay gacan ka geystaan ​​kordhinta tayada iyo midabka deegaanka, waxay u sameeyaan saameyn ka-hortagga dhalaalka meelaha biyaha iyo barafka leh.
Waa inaad kala doorataa iftiinka, muraayadaha raaxada leh ee la jaan qaadaya anatomy ee wejigaaga, waxaa jira moodooyin aan la tirin karin oo suuqa yaala oo kuusoo jiidan kara.
Hawo wanaagsan: Waa inaad tixgelisaa hawo-qaadashada wanaagsan ee u dhaxeysa muraayadaha indhaha iyo wejigaaga, si aysan u muuqan qulqulka farxadda leh ee muraayadaha indhaha. Tani waxay badanaa ka dhacdaa meelaha qoyaan badan iyo jiilaalka.
Iyadoo gubasho wanaagsan: kuwaas oo ah kuwo wax ku ool ah oo si fiican madaxa u haysta. Haddii aad ku tababbarto isboortiga buuraha sida fuulitaanka ama baaskiil wadista, waxaa muhiim ah in macbudyadu ay ahaadaan kuwo go'an. Tan awgeed waxaa jira qalabyo dheeri ah oo xajin ah sida xarkaha.
Maxay muraayadaha indhaha muhiim ugu yihiin buuraha?
Muraayadaha qoraxda waa inay naga ilaaliyaan wax dhibaato u leh shucaaca UVB. Waa inaad ogaataa 1000-kii mitir ee sare ee aad fuusho buurta, falaadhaha UVB waxay kordhiyaan 10%. Waxaa jira waxyaabo dabiici ah oo kordhiya heerkan falaadhaha, sida barafka, maadaama ay ka tarjumeyso 80 ilaa 90% shucaaca, si ay kuu siiso fikrad aag baraf la'aan ah ayaa ka tarjumeysa 20%.
Shucaaca qoraxda waxaa lagu dhuftaa 1,5 ilaa 2000 m oo ka sarreysa heerka badda, iyo 2,5 illaa 4000 m. Sidoo kale waa in la ogaadaa inay u nuglaandoonto iyadoo kuxiran xiliga sanadka iyo dhacdooyinka falaadhaha cadceeda. Shucaaca aad ayuu uga sarreeyaa xilliga dayrta marka loo eego guga, isaga oo kor u kacaya 25% in ka badan koritaanka lakabka ozone.
Dhibaatooyinka sababi kara marka aan la isticmaalin
Calaamadaha ugu caansan badanaa waa cillad maskaxeed, iyadoo gabow ku dhaca dhammaan unugyada qeybta ka ah isha.
Cayayaanka: Waa koritaanka aan caadiga ahayn ee unug dhibsanaya samaynta lakab yar oo casaan ah oo xanaaqa oo xitaa noqda aad u xanaaq badan.
Cudurka "White out" Cudurkan badanaa wuxuu u muuqdaa mid badan markii isboortiga qabow daran lagu dhaqmo, isagoo gaaraya qabowga baalalka indhaha sababo la xiriira heerkulka oo hooseeya, wuxuuna keenayaa aragga, sawir-qaadista iyo xitaa necrosis aan laga soo kaban karin.
Photokeratitis ama indhaha indhaha barafka, sababtoo ah soo-gaadhis dheer oo ay ku yeesheen falaadhaha UVB oo keenaya nabaad-guur ku dhaca unugyada daboolaya kiliyaha isha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Muraayadaha indhaha ee buurta